Shanduko muripo wechibvumirano chebasa - Law & More B.V.
Blog » Shanduko muripo wechibvumirano chebasa: chinoshanda sei?
Mune mamwe mamiriro ezvinhu, mushandi ane kontrakiti yebasa inoguma ane kodzero yekuripwa zviri pamutemo. Izvi zvinodaidzwawo kunzi shanduko yekubhadhara, inoitirwa kufambisa shanduko kune rimwe basa kana rekugona kudzidziswa. Asi ndeipi mirawo maererano neiyi yekubhadhara muripo: mushandi anokodzera kupi uye riini muripo wekushandura chaizvo? Mitemo ine chekuita nekushandurwa kwekubhadhara (kontrakiti yenguva pfupi) inokurukurwa zvakateedzana mune ino blog.
Kodzero yekubhadhara muripo
Zvichienderana neunyanzvi. 7: 673 ndima 1 yeDutch Civil Code, mushandi ane kodzero yekubhadhara muripo, uyo ungangoshandiswawo kune zvisina basa. Art. 7: 673 BW inotsanangura kuti mushandirwi anosungirwa kubhadhara izvi.
Kupera kwechibvumirano chebasa panguva yekutanga mushandirwi panotangira mushandi
nekukanzura kodzero yekubhadhara muripo hapana kodzero *
nekuparara kodzero yekubhadhara muripo hapana kodzero *
nekushanda kwemutemo pasina kuenderera kodzero yekubhadhara muripo hapana kodzero *
* Mushandi anongokodzera kupihwa muripo wekuchinja kana izvi zviri mhedzisiro yezviito zvakakomba zvakakomba kana kusiiwa kune iye mushandirwi. Izvi ndizvo chete zvinoitika mune zvakakomba nyaya dzakadai sekushungurudzwa pabonde uye rusarura.
Mune zvimwe zviitiko, zvakadaro, mushandirwi haapi chikwereti chekuchinja. Izvo zvinosarudzika ndezvi:
mushandi ari mudiki pane gumi nemasere uye akashanda asingasviki maawa gumi nemaviri pavhiki paavhareji;
chibvumirano chebasa nemushandi asvitsa zera rekurega basa chinogumiswa;
kumiswa kwechibvumirano chebasa imhedzisiro yezviito zvakakomba zvine mhosva nemushandi;
mushandirwi akanzi abhuroka kana kuti akamiswa;
chibvumirano chevashandi chakabatanidzwa chinotaura kuti pachinzvimbo chekubhadharisa shanduko, unogona kugamuchira chinotsiviwa kana kudzingwa kwacho kukaitika nekuda kwezvikonzero zvehupfumi. Iyi yekutsiva nzvimbo ndeyechokwadi zvinoenderana nemamwe mamiriro.
Mari yekushandurwa kubhadhara
Mari yekuchinjisa inosvika ku1 / 3 yemutero wakakura pamwedzi pagore rebasa (kubva pazuva rekutanga rekushanda).
Iyi fomula inotevera inoshandiswa kwemazuva ese asara, asi zvakare nezvebasa rakatora risingasviki gore: .
Mari chaiyo yemubhadharo weshanduko saka zvinoenderana nemubhadharo uye nguva yakashanda mushandi kumushandirwi. Kana zvasvika pamubhadharo wemwedzi wega wega, mari yezororo uye zvimwe zvipo zvakadai semabhonasi uye mari yekuwedzeredza inofanirwa kuwedzerwa. Kana zvasvika kumaawa ekushanda, zvibvumirano zvinoteedzana zvemushandi nemushandirwi mumwe chete zvinofanirwa kuwedzerwa pakuverenga kweiyo makore emakore ebasa. Zvibvumirano zvemushandirwi anoteedzana, semuenzaniso kana mushandi pakutanga akashandira iye mushandirwi kuburikidza nesangano revashandi, rinofanirawo kuwedzerwa. Kana pakave nenhambo yemwedzi inodarika mitanhatu pakati pezvibvumirano zviviri zvevashandi, chibvumirano chekare hachina kubatanidzwa mukuverenga kweiyo makore emakore ebasa akashanda pakuverengerwa kwemubhadharo weshanduko. Makore ayo mushandi anga achirwara akaiswawo muhuwandu hwemakore ebasa akashanda. Mushure mezvose, kana mushandi akarwara kwenguva yakareba nemubhadharo wemubhadharo uye mushandirwi akamudzinga mushure memakore maviri, mushandi achiri nekodzero yemubhadharo wekuchinja.
Iyo yekupedzisira shanduko yekubhadhara iyo iyo mushandirwi yaanofanira kubhadhara ndeye € 84,000 (muna 2021) uye inogadziridzwa gore rega. Kana iye mushandi akapfuura iyi yakakwenenzverwa huwandu zvichibva nenzira iri pamusoro yekuverenga, iye achazogashira chete € 84,000 chete yekubhadhara muripo muna 2021.
Kubva muna1 Ndira 2020, hazvichashandi kuti chibvumirano chebasa chinofanira kunge chakatora makore maviri kana kodzero yekushandurwa kubhadhara. Kubva muna 2020, mushandi wese, kusanganisira mushandi ane chibvumirano chenguva pfupi, ane kodzero yekubhadhara muripo kubva pazuva rekutanga rekushanda.
Iwe uri mushandi uye iwe unofunga iwe unekodzero yekubhadharira mari (uye hauna kuigamuchira)? Kana iwe uri mushandirwi uye uri kushamisika kana iwe uchisungirwa kubhadhara wako mushandi muripo wekushandura? Ndapota taura Law & More nerunhare kana e-mail. Magweta edu ane hunyanzvi uye ane hunyanzvi mumunda wemutemo webasa anofara kukubatsira.
Previous Post Isiri-yemakwikwi chikamu: chii chaunoda kuziva?
Next Post Chii chinoitwa negweta?